Ny endriky ny tranom-bakoka no mampiavaka an'i Copenhague : na dia kely aza ny haben'ny tanàna, dia misy enina enina eto. Andao hiresaka momba ny sasany amin'ireo malaza indrindra.
Ny tranom-bakoka nasionaly ao Danemark dia miorina ao afovoan-tanànan'i Copenhague, akaiky ny toeram-pialan-tsasatra, trano fisakafoanana sy hotely tsara indrindra. Izy dia miresaka momba ny tantaran'i Danemarka, ireo firenena mpifanolo-bodirindrina ary Greenland, manomboka amin'ny vanim-potoana "talohan'ny vanim-potoana".
Rosenborg dia iray amin'ireo trano mimanda telo, izay tsy niova nanomboka tamin'ny taona 1633 (taorian'izay no niorina ny trano fiarovana). Manomboka amin'ny 1838 dia misokatra amin'ny famangiana maimaim-poana. Eto dia ahitanao fanangonana fiompiana zaridaina sy volafotsy, mifankazava amin'ny fiainan'ny fianakavian'ny mpanjaka ao amin'io vanim-potoana io, jereo ny fiverenan'ny mpanjaka sy ny firafitry ny fianakavian'ny mpanjaka. Any akaikin'ny lapa dia zaridaina tsara tarehy.
Any Danemark dia fantatr'izy ireo ny fomba hanomezam-boninahitra ireo mpiray tanindrazana malaza. Ny tranombakoka Hans Christian Andersen any Copenhague dia malaza be tsy anisan'ireo mpizahatany, fa voalohany indrindra, anisan'ny Danes ihany koa. Izy io dia ao amin'ny tranobe misy ny tranom-bakoka Ripley. "Minoa fa tsia, fa tsy." Ny fampiratiana mozika dia ahitana sary sokitra, sary sy sary hosodoko mampiseho ireo maherifon-tsofiny. Ary, mazava ho azy, eto ianao dia afaka mahita ny endriky ny haingonan'ny mpanoratra, izay mipetraka eo amin'ny latabatra ao amin'ny biraony.
Tranom-bakoky ny seranan-tsambo Danoa momba ny tantara maherin'ny telon-jato taonan'ny sambo; Ireo mpitsidika dia afaka mahita modely marina amin'ny sambo - manomboka amin'ny sidina sy farany amin'ny maoderina, miasa amin'izao fotoana izao ao amin'ny Navy Danemark androany, ary koa ny antsipirihan'ny sambo fiara, fitaovana, fitaovam-piadiana sy sary hosodoko ahitana sambo manan-tantara manan-danja mifandray amin'ny doroana danois, portraits de commandés marine.
Ny tranombakoka voalohany ny zavakanto any Danemark dia tranom-bakoka natokana ho an'ny mpanao sary sokitra dôlônika indrindra - Bertel Thorvaldsen. Eto dia misy sary sokitra nivoaka avy amin'ny mpanao asa tanana nataon'ny mpanamboatra marbra sy plaster, ary koa ny zavatra manokana nataon'ilay mpamorona sy ny fanangonana hosodoko, bronzes, vola madinika izay natolony ny tanànany tamin'ny 1837. Misy ny tranombakoka Thorvaldsen eo akaikin'ny tranon'ny mpanjaka, ny Lapan'ny Christianborg .
Mipetraka ao afovoan-tanànan'i Copenhague, ny Museum of Art State dia ahitana karazana zava-kanto maro: sary hosodoko, sary sokitra, trano. Eto dia ahitanao ny sarin'ireo mpanakanto malaza amin'ny Renaissance toy ny Titian, Rubens, Rembrandt, Bruegel Peter the Elder ary Brueghel Peter Jr., ary koa ny sary hosodokan'ireo mpanakanto noforonina tamin'ny taonjato XIX-XX: Matisse, Picasso, Modigliani, Leger ary ny hafa. Afaka mitsidika ny fampirantiana maharitra ianao afaka maimaim-poana.
Ao amin'ny faritra avaratry ny tanàna dia misy tranom-bakoka kely Ordrupgaard, izay manolotra ireo mpitsidika maromaro hosodoko amin'ny sary an-tsaina frantsay. Eto ianao dia mahita ny hosodoko avy amin'i Degas, Gauguin, Manet ary mpanakanto hafa malaza.
Ny new carlsberg glyptoteka dia tranom-bakoka zavakanto antsoina hoe tompon-daka Karl Jakobsen, tompon'ny Karlsberg. Ny tranom-bakoka dia ahitana sary hosodoko sy sary sokitra marobe. Eto dia ahitanao ny sarin'ireo mpanoratra an-dàlambe malaza sy Post-Impressionists, sarivongan'i Rodin sy Degas, ary tahirim-bolam-behivavy tena manan-karena.
Ny tranombakoka hafa tany am-boalohany
Ny fanatanjahantena iray hafa an'i Copenhague dia tranom-bakoka momba ny eroticism , voalohany amin'ireo mozika toy ireny. Izy io dia noforonin'ny mpilalao horonantsary mpilalao sarimihetsika Olom Yejem Kim Paisfeldt-Klausen tamin'ny 1992, ary tamin'ny 1994 dia nifindra tany amin'ny trano tsara tarehy iray tao afovoan-tanàna, izay nisy azy mandra-pifaranany tamin'ny 2010.
Ny famoahana ny tranombakoka miaraka amin'ny anarana hoe "Experimentarium" dia mifandraika amin'ny "fahagagana" ara-teknika, siantifika, ary voajanahary; Ireo mpitsidika dia tsy afaka mahita fotsiny ireo fampiratiana, tahaka ny ataony any amin'ny tranom-bakoka hafa, fa koa mikasika azy ireo ary mandray anjara amin'ny fanandramana mahaliana. Ny tranombakoka dia malaza amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe, mihoatra ny 360.000 no mitsidika azy isan-taona.
Ny Museum of Applied Art (antsoina koa hoe Museum Museum) dia manolotra mpitsidika roa fampirantiana maharitra. Ny fampiratiana ny fanaka sy ny famolavolana ny taonjato XIX-XX dia misy efitrano maromaro manome fahafaham-po amin'ny fomba samihafa. Ny fampiratiana ny lamaody sy ny lamba, ao amin'ny efitrano efatra, dia miresaka momba ny tantaran'ny lamaody, hatramin'ny taonjato XVIII.
Faly koa ny mpitsidika mitsidika ny Museum World Records Guinness. Ao amin'ny efitrano 1000 m 2, dia afaka mahita sary, horonan-tsary, sary sokitra ary zavatra hafa mifandraika amin'ny rakitsoratra tena mahatalanjona voasoratra ao amin'ny Book of Records.
Ahoana no hanesorana ny tavanao amin'ny sisiny?
Sary nalaina - ririnina 2016
Lady Gaga dia hisolo ny beyoncé bevohoka amin'ny Festival Coachella
Manicure eo amoron-dranomasina
Tavy ho an'ny mozika
Salohy karaoke koreana
Baomba ho an'ny bata amin'ny tanany
Coats - Lohataona 2015
Ahoana no tokony hametrahana linoleoma?
Face crème - sakafo